९ असार २०७९, बिहिबार १:३४
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा भएको उक्त विरोध प्रदर्शनमा सरकारले कर लिएर पनि व्यवसायी र मजदुर मार्ने नीति अपनाएको भन्दै आरोप लगाए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत जिआई वायर, वनस्पति घिउ र स्यानिटरी प्याड लगायत उद्योगका लागि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा पर्ने बताएका छन् । एकातिर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गरेको तर अर्कातिर उक्त वस्तु आयातमा भन्सार कटौती गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
हवाई भाडा फेरि बढ्यो, कहाँकाे कति ? (सूचिसहित)
अप्पर सोलु हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, कति भर्ने ?
बागमती प्रदेशको बजेट आज पास गर्ने तयारी
हैजा रोकथामबारे एनआरएनएको सुझावः व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणमा विशेष ध्यान दिऔं